Manampahefan’ny Fampilezampeo Any Thailandy Manakana Ny Tambajotran’ny Fahitalavitra Iray Niantso Ny Lehiben’ny Tafika Ho Mpanao Didy Jadona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Septambra 2017 5:05 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Swahili, Português, Français, Italiano, English
Miato mandritra ny iray volana ny tambajotra Peace TV. Sary avy amin'ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety Any Azia Atsimo Atsinanana, fampiasana nahazoana alàlana.
Notapahan‘ny Kaomity Nationaly misahana ny Onjampeo sy ny Fifandraisandavitra ao Thailandy (NBTC) mandritra ny iray volana ny fahazoandàlan'ny tambajotranà fahitalavitra iray izay nitsikera ny politikan'ny governemanta tarihan'ny miaramila.
Nosoniavina tamin'ny 9 Aogositra 2017, hanan-kery ity didin'ny NBTC ity rehefa tonga any amin'ny tambajotran'ny Peace TV ilay taratasy.
Mifandray amin'ny antoko Tokana Manohitra Ny Jadona Ho an'ny Demokrasia ny Peace TV, vondrona izay fantatra ihany koa amin'ny hoe “lobaka mena” izay mpanohana ny praiminisitra teo aloha Thaksin Shinawatra ireo mpitarika malaza ao aminy. Ny sasany amin'ireo “lobaka mena” koa dia fantatra amin'ny tsikera momba ny lalàna Lese Majeste (fanivaivàna manohitra ny mpanjaka), izay nampiasan'ny governemanta hanenjehana ireo mpikatroka sy mpanao politika manohitra ny fitondran'ny tafika.
Norombahan’ny tafika tao Thailand fahefana tamin'ny 2014 ary nipetraka teo amin'ny fahefana tamin'ny alàlan'ny lalàm-panorenana narafiny izy. Nivoady izy ny hamerina indray ny fitondrana sivily raha vao vita ny fanavaozana politika sy fifidianana. Hatramin'ny taona 2014, nandamina tanteraka ny fampahalalam-vaovao ny governemanta ary nisambotra ireo mpampiasa aterineto voaheloka ho nanala baraka manampahefana .
Nilaza ny NBTC fa nandika lalàna ny Peace TV rehefa nandefa fandaharana roa tsy mankatoò ny lalampanorenana fitondram-panjaka tokana, ny filaminam-pirenena ary ny “fitondrantena tsara”. Na izany aza , tsy nomarihany ny hoe ampahany inona tamin'ireo fandaharana no namporisika ny vahoaka hanohitra ny governemanta.
Inty no fanintelony nanapahan'ny NBTC ny Peace TV. Efa notapahina tamin'ny Aprily 2015 sy Jolay 2016 izy io noho izay voalaza fa fanelingelenana ny filaminam-pirenena.
Misy mino fa notapahana ny Peace TV satria sahy niantso ny filohan'ny tafika teo aloha ary piraiminisitra amin'izao fotoana izao, Prayut Chan-o-cha, ho mpanao didy jadona:
felahan'ireo manampahefana ao #Thailandy ny @peacetvnews miaraka amin'ny fanakanana 30-andro noho ny fiantsoana an'i Gen Prayut mpitarika #tafika ho “mpanao didy jadona”. #sivana pic.twitter.com/32RaKf8wDy
Nanadihady momba ilay didim-pitsarana henjana manjo ny NBTC ny Fikambanan'ny mpanao gazety any Azia Atsimo-Atsinanana satria hisy fiantraikany eo amin'ireo fandaharana sy ireo rehetra mpiasa ao amin'ilay tambajotran'ny fahitalavitra izany:
Hitanay ho diso henjana loatra ilay fampiatoana, satria nanondro fandaharana iray tamin'ny daty iray voatondro ny NBTC ary nolazain-dry zareo ho fanitsakitsahana ny lalànan'ny fampielezampeo any Thailandy izany. Manasazy ny fampielezampeo iray manontolo ilay didy, anisan'izany ny fandaharana rehetra, na inona na inona votoatiny, ary ny mpiasa rehetra na inona na inona andraikiny.
Nampitandrina ihany koa ilay vondrona fa hitarika any amin'ny famerana bebe kokoa ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety any Thailandy ilay didy mihatra amin'ny NBTC:
Ny fahefana midadasika be sy manao safo-be mantsina toy izany, indrindra eo ambaninà lalàna iray mahazatra, dia tokony hampiasaina amim-pitandremana sy fandanjalanjana, satria mety hametraka lalàna izay hanitsaka ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety sy ny zon'ny vahoaka hahalala sy haheno ny lafy rehetra amin'ny lahateny politika ao anatin'ny fiarahamonina Thailandey izany.
Nanamafy ireo manampahefana ao amin'ny Peace TV fa ireo fandaharana notononin'ny NBTC dia tsy namporisika ny vahoaka hirongatra hanohitra ny tafika. Nampian'izy ireo fa nandritra ilay fampiatoana naharitra iray volana, mbola handeha amin'ny Facebook Live ireo fandaharan'ny Peace TV.
Nametrahan'izy ireo fanontaniana ihany koa ny fotoana namoahana ilay didy fampiatoana, izay nifanandrify tamin'ny famotorana tamin'ny 25 Aogostra momba ny kolikoly natao an'i Yingluck Shinawatra, ilay Praiminisitra voaongana. Saingy nolavin‘ny Praiministra Prayut ny hoe naato ilay tambajotran'ny fahitalavitra mba ho fampanginana ireo haino aman-jery mpanohana ny “lobaka mena” nandritra ny fitsarana an'i Yingluck. Nilaza izy fa raha izany no fikasan'ny governemanta, dia ny tambajotran'ny fampitambaovao rehetra no tokony haatoan'ny NBTC.